ကျွန်တော်တို. နေ.စဉ် သုံးနေသော Ware နဲ့ဆုံးသော စကားလုံးများအကြောင်း | ဇော်မျိုး
← open SUSE 11.1 Linux OS သုံးကြမယ်
ကိုယ်မသုံးချင်တဲ. G-mail ဘယ်လို ဖျက်မလဲ →
ကျွန်တော်တို. နေ.စဉ် သုံးနေသော Ware နဲ့ဆုံးသော စကားလုံးများအကြောင်း
(Hardware, Software, Spyware and Firmware, Shareware)
ကွန်ပြူတာမှာ ware နဲ့ဆုံးတဲ့စကားလုံးတွေ တော်တော်များများ သုံးထားတာတွေ့မိ ပါတယ်။ Hardware, Software, Adware, Spyware, Firmware, Shareware စတဲ့ စကားလုံး တွေ သုံးထားတာတွေ့ရပါတယ်။ ကျွန်တော်ဖတ်ထားသမျှအားလုံးကို ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။ အမှားများရှိတယ်ဆိုရင်တောင်းပန်ပါတယ်။
Hardware ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းကို အိမ်ဆောက်ပစ္စည်းကိရိယာတွေ ရောင်းတဲ့ဆိုင်မှာ အိမ်ဆောက်ပစ္စည်းကိရိယာတွေကို ရည်းညွှန်းပြောဆိုတဲ့အခါမှာ သုံးတာတွေ့မိပါတယ်။ ကွန်ပြူတာမှာတော့ Hardware ဆိုတာ ထိနိုင်၊ ကိုင်နိုင်တဲ့ ပစ္စည်းတွေဟာ Hardware တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ Printer, System unit, Monitor, Keyboard, Mouse, Power Supply unit စတာတွေကို hardware တွေလို့ခြုံပြီး ခေါ်ဝေါ်ပါတယ်။ ကွန်ပြူတာ ပြင်ဆင်ပေးတဲ့သူတွေကို
hardware technician, hardware engineer လို့ခေါ်ပါတယ်။ အဲဒီလိုပြင်ဆင်နိုင်အောင် သင်ကြားပေးတဲ့ သင်တန်းမျိုးကို hardware training center စသဖြင့် သုံးတာမျိုးလည်းရှိပါတယ်။
ကျွန်တော် ဖိုရမ်မှာ စာတွေ တော်တော်များများ ရေးခဲ့ဖူးပါပြီ။ ရေးခဲ့သမျှတွေထဲမှာ တစ်ချို့ အားလုံး ဖတ်ဖြစ်ကြတာတွေလည်း ရှိမယ် – အားလုံး မဖတ်ဖြစ်ကြပဲ အမှုမဲ့ အမှတ်မဲ့ ကျော်သွားခဲ့ကြတာတွေ လည်း ရှိမယ်။ ဒါတွေ အားလုံးကို ခြုံငုံပြီး ကျွန်တော် ရေးခဲ့သမျှ ထဲက အားလုံးအတွက် အကျိုးရှိ လောက်မယ်လို့ ယူဆမိတဲ့ ဆွေးနွေးချက် တစ်ချို့နဲ့ ကျွန်တော် သိရှိခဲ့သမျှ အင်တာနက်ထဲက သိရှိမှတ်သား ထားသင့်တဲ့ ကောင်းနိုးရာရာ အချက်အလက်အသစ် တစ်ချို့ကို ဝေမျှနိုင်ဖို့ ချစ်သမီးသို့ ပေးစာများ ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ လေ့လာ မှတ်သားထားချက် တစ်ချို့ကို သမီးတစ်ယောက်ဆီ ရေးသားထားတဲ့ ပေးစာတစ်စောင်လိုမျိုး ရေးသားဝေမျှ ဖြစ်လိုက်ပါတယ်။ လေ့လာမှတ်သားရင်း ဗဟုသုတများ ဆထက်တစ်ပိုး တိုးပွားနိုင်ကြပါစေ။
Filed under ဗဟုသုတ